ORODAAN KU NIMIDE ARMAAN OROD UGA TAGANAA? | Wacyigelin's Blog
Ahmed Galaydh on U ISTAAG SOMALIA MPLS MNmohamed anshur on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…سليمان on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…siciid on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Abdirizaak ahmed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…mohamed on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…Dr. Farxaan jama on DARIIQA JANADA LOO MARO: QISO…Peter Greste case: i… on Al-Jazeera’s Peter Grest…Johnd761 on LOS ANGELES CITY PLANER FAISAL…Mahad xiddig on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…wacyigelin on العلم والإيمان – د. مصطف…Bucul on DHOWR ASKERI OO KA GOOSATAY JA…En ismail abdi yasin on MA KU QOSLAA MISE WAAN OOYAA?…yassin saleh osman on KA TASHADA CADAAWOHOO ISKU TII…	ORODAAN KU NIMIDE ARMAAN OROD UGA TAGANAA?
Posted on August 28, 2010 by wacyigelin	Waxaan go’aansaday inaan soo bandhigo maqaalkan kadib marki uu isoo wacay nin aan saaxiibo nahay asagoo igala tashanaya arin aad muhiim ugu ah asaga. Ninkan hadda ka hor ayaan idiin soo ban dhigay sheeko ina dhexmartay taas oo aan maqaalkeeda cinwaan uga dhigay “YAABKA YAABKIISU WAA MARKUU QALBIGAADU KU XABISO.” Haddaba intaanan sheekada ina dhexmartay aanan gelin ayaan waxaan doonayaa inaan marka hore idin la socodsiiyo waxa keenay ninkan inuu isoo woco oo laga yaabo in dad badan oo idinka idika mid ah ay u saamaysay sidiisa.
Waxaa maalmahaan socday duufaan taabatay gobalo fara badan oo ka tirsan dalkan maraykanka taasoo horay u jirtay balse aad u xoogaysatay kadib marki lagu dhawaaqay dhisitaanka masjid la doonayey in laga dhiso magaaladasi New York. Arintan oo sideedaba ku bilaabatay si xasaasi ah ayaa waxaa dhacday inay dad siyaasiyiin ah sida islaanta horay isugu soo sharaxday madaxwaynanimada ee ku nool gobolkaasi Alaska, dad culumo masiixiyiin xag jira ah oo aad uga soo horjeeda ku fiditaanka islaamka ee dalkan Maraykanka, iyo weliba guud ahaan xisbiga Jumhuuriga oo aad ugu isticmaalaya arintan doorashooyinka dhici doona ay sii cakireen oo ololohoodu keenay inay dad badan oo caadi ahaa ay bilaabeen ka soo horjeesashada mashruucan. Haddaba marki ay saxaafaddu aad u buunbuusnisay arintan dad xag jir ahna ay guubaabiyeen dadka Maraykaa ee masiixiyiinta ah ayaa waxaa dhacday in arintu ay ku sigatay inay faraha ka baxdo oo dadka masiixiyiinta ahi ay faraha ula tagaan dadka muslimka. Runti dalkan sharciga ayaa aad loo ilaaliyaa taas ayaana keentay in arintu aanay faraha ka bixin balse dhacdooyin ayaa dhacay tusinaya mowqifka dadka qaar. Waxaa maalin dhowayd Tagsi uu wado nin Muslim ah ee magaalaasi New York soo raacay nin dhalinyaro ah oo 21 sano jira. Waxa uu sheeko la bilaabay ninki ilaa uu marki danbe waydiiyay hadii uu muslim yahay taas oo uu “haa” uga jwaabay ninki Muslimka ahaa. Markay intaas dhacday ayuu ninki dhalinyarada ahaa wuxuu ninki ku bilaabay inuu mindi uga dhufto qoorta taas oo keentay inuu isdifaaco inkasta oo uu dhowr dahaawac gaarsiiyay hadana wuxuu awooday ninki tagsiilaha aha inuu baabuurki ku agjoojiyo baabuur ay booliisku leeyihiin taas oo keentay inay booliiski ninki dhalinyarada ahaa qabtaan sidaasna xabsiga loogu taxaabo. Tass waxaa xigay arin kale oo yaab leh.
Waxaa dhacday isla magaaladaasi New York in nin masiixi ah uu soo galay masaajid dabadeedna bilaabay inuu caayo dadka muslimiinta ah iyo diinta islaamka. Intaas kuma sinan ee wuxuu ku dhexkaadiyay masaajidki. Waxaan filayaa in dad badan ay iswaydiinayaan maxay u dhacayaan waxan oo dhan. Runti sida annagu aan u qabno dad xag jir ah ayay dadkanna u leeyihiin xag jir weliba mararka qaar ay taageeraan madax sar sare laga yaabeena mararka qaar in ay taageeradaasi gaarto heer madaxweyne. Haddaba dhacdooyinka la xiriira masaajidada kuma eka New York ee meela kale ayay sidoo kale ka dheceen. Waxaa masaajid in laga dhsio lagu murmay magaaladaasi Murfreesboro ee ka tirsan gobolka Tennesse. Waxaa arintaas dadka shacabka ah ka sokow dadka ka soo horjeestay ka mid ahaa dad u tartamay jagooyin sida maamulka gobalka iyo weliba senate-ka.
Booliiska degmadaasi Rutherford ee gobolkaasi Tennesse ayaa baaraya cabasho ku saabsan rasaasayn ka dhacday meel u dhow dhismaha markazka islaamiga ah ee Murfreesboro oo saaran waddada Veals oo ka soo baxda Bradyville Pike. Arintan waxay dhacday galabta oo taariikhdu ay tahay 5/29/2010. Dadka isugu yimiday masaajidka yaa waxay maqleen rasaas ka soo dhacday laba dhinac iyagoo markaa la amakaagsanaa qasaare loo gaystay qalba dhisme oo meeshaas yaaley. Hal jiho waxaa ka soo dhacay lix xabadood meesha ay dhinaca kale ka dhaceen saddex xabadood. Arintan waxay dahcday saacaddu markay ahayd saddexdi iyo shan iyo toban daqiiqo. Sidaas waxaa sheegay mid ka mid ah dadki meesha joogay.Qalab dhismaha oo meeshaas yiilay ayaa qaar la jejebiyay isla dhamaadki usbuucan.
Sidoo kale tuulo yar oo ku taala California waxaa lagu murmay masaajid meel laga dhisi lahaa. Waxaa isla California ka dhacday arin kale oo soo jiidatay indhaha dadka deegaanka kadib markii lagu tuuray bulukeeti dhismaha markaz islaami ah ee halkaa ku yaal laakiin aanu wax dhibaataa gaysan. Balse waxaa laga helay halkaa qoraal oranay, “Ameerikaay kac cadawgi halkanuu joogaaye” iyo weliba “Maya in loo dhiso macbad ilaaha argagaxisada”
Waxaa intaas sii dheer in tuulo ku taal gobolkaasi Kentucky oo hilibka lagu qalo Soomaali bandanna ka shaqayso ay ka ijaarteen guri si ay ugu dukadaan taas oo kicisay dadka deegaanka abuurtayna muran soo kala dhexgala dadka muhaajiriinta ah ee Soomaalida oo qaar haystaan dhalasho iyo dadka deegaanka oo iyagu masiixiyiin ah. Dadku waxay u qaateen in masaajid la dhex keenay taas oo aad uga carysiisay.
Intaas waa dhibaatada ka taagan xagga dhismaha masaajidada iyo weliba wixi ay natiijo abuureen. Waxaa jirta inay dhowr jeer dheceen arimo sidan oo kale ku salaysan xamaasad loo qabo in laga hortago islaamka ku fidaya Maraykanka iyadoo taasi keentay in xitaa dad masiixiyiin ah iyo kuwo diimo kale heystaba loo dhibaateeyo. Waxaa mar hore ka dhacday Arizona in nin Sikh ah la dilay kadib marki loo maleeyay muslim maadama uu lahaa gar wayn maduxuna u duubanaa taas oo u eg astaanta lagu yaqaan dadka ku nool saxaraha amaba muslimka ah waa cimaamaddee. Waxaa sidoo kale dhacday in nin Giriig ah oo masiixi ah uu nin dhalin yaro ah waydiiyay inuu u tilmaahmo sidi uu ku tegi lahaa meel uu u socday. Ninki dhalinyarda ahaa wuxuu yiri ii sug in yar asagoo dabadeedna baabuurkiisa kala soo baxay birta boolasha lugaha baabuurta lagu furo dabadeedana ku garaacay ninki. Arinta ugu yaabka badnayd waxay ahayda kadib marki la waydiiyay sababta uu dhibkanugu gaystay ninka inuu ku been abuurtay oo uu yiri wuxuu ahaa irhaabi oo wax buu qarxin rabey iyo wixi la mid ah. Kadib marki ninki cusbitaalka lageeyay ayaa la ogaaday inuuba yahay masiixi. Intaas waa inta ay saxaafaddu soo gudbisay laakiin inta aanan la ogayn ayaaba ka badan. Runti dhacdooyinkan iyo kuwo ka foolxun ayaa ka dhacay Yurub sida in maxkamad algu dhex dilay naag dacwad ku soo oogtay nin u ihaaneeyay xijaabka dartiis taasoo uu tooreey ku dilay isla ninkaasi maxkamadda dhexdeeda. Taas waxaaba ka sii darnayd in ninkeedi oo isku deyay inuu naagta ka celiyo ninka uu Booliisku toogtay inkasta oo ay ku marmarsimoodeen wuxuu ku qalday ninki weerarka gaystay. Haddaba dabayshu meel walba oo reer galbeedka ah way gaartay waxaadnaba moodaaba inuu Maraykanku ugu roonyahay maadaama dalkan sidiisaba dad kala duwan dhan walba ku noolyihiin.
bishan Octobar ee 2011, waxaa dadka muslimiinta ah ee ku nool ka cabanayaan dad basaassin ah oo muhaajiriin ah una shaqeeya FBI-da kuwaas mararka qaar dadka inay denbi geliyaan isku daya. Sidoo kale waxay ka cabanayaan booliiska oo si cunsurinimo ah ula dhaqama, telefoonadooda oo la dhegaysto, iyadoo la abuuray liisas soo koobaya akhbaarta dadka muslimiinta ah ee dhan walba ah kuna nool New York, iyo weliba arimo kale oo ay dadka muslimka ah ee degan halkaa aad uga caroodeen.
Yaanan warka idinku daaline, dhacdooyinkan noocan ah waxay dad badan ku abuureen wel wel iyo walaac iyadoo qaarkood iswaydiiyeen hadiiba ay ku noolaan karaan dalkan. Waxaa dadkaas ka mid ah ninkan aan kor ku soo sheegay oo aan saaxiibada nahay oo isagu wax walba meel fog ka eega gaar ahaan dhinaca xun. Wuxuu ninkan daliilsadaa maahmaahyada leh “kheyr wax kaama dhibee shar u toog haay”.
Haddaba, waxaa dhacday in ninkan uu doonayey inuu guursado dabadeedna ay heshiiyeen gabar Soomaaliyeed iskuna waafaqeen guur. Marki ay intaas dhacday ayaa cidda gabadha dhashay iyo isagu arinti dhameeyeen oo ay tagtay sheekadu inuu tago gobolka ay gabadhu ku nooshahay si uu arooska kadib gabadha usoo wato oo uu u keensado gobolka uu deganyahay.Gabadha oo muxajabo ah ayaa wuxuu ninkan iswaydiiyay sida ugu fudud ee uu ku keeni karo iyagoon la kulmin wax dhib ah oo loo gaarsiiyo diinta daraadeed maadaama arintu kacsantahay maalmahan. Haddaba wuxuu is barbadhigay midda u nabadgelyo badan inay tahay diyaaradda iyo inay tahay baabuur inuu ku soo qaado gabadha. Ninkan waxaa waswaaska ku abuuray dhacdooyinka aan kor kusoo sheegay asagoo ah nin aad ugu kuurgala dhacdooyinkan iyo kuwa la midka ah aadna ula socda akhbaarta qusaysa dadka muhaajiriinta ah, cunsuriyadda, iyo wliba arimah muslimiinta ku nool dalkan.
Wuxuu iisoo wacay si uu iila tashado aniguna siday iila muuqatay ayaan u sheegay. Waxaan waydiiyay waxa ku kalifay inuu baabuur ku tago oo uu gabadha ku soo qaado taas oo uu uga jawaabay sidan: Hadii aan baabuur wato cid aan isla hadlayno ma jirto oo aniga iyo iyada unbaa baabuurka saaran laakiin markaan diyaarad raaco waa inaan maraa madaarka meelaha dadka lagu hubiyo iyadoo laga yaabo in xijaabka dartii naloo dhibo.
Waxaan u sheegay in diyaaraddu u fiicantahay oo waqtiga uu yaryahay laakiin baabuurku uu soconayo muddo dheer iyadoo weliba uu istaagayo meela uu ka qaato shidaal taasna wax walba ka imaan karaan. Tan kale waddada dadka baabuurta ku wata cid walba ayaa ku jirta taasna qatar ayayba idiin bandhigi kartaa ninki dhib idinla rabana si fudud ayuu idiin gaarsiin karaa laakiin madaarka cid walba waa la baarayaa oo cid hub wadata ma jirto. Markay intaasi ina dhex martay ayuu yiri waa runtaa waana kugu raacay adigoo mahadsan.
Inta qoslay, ayaan ku iri, “war ninyohow cigaal shidaad fir miyaad wadaagtiin.” Runti kaftan ayaan ula jeeday laakiin saaxiibkay aad ayay u taabatay oraahdan asagoo si kulul iigu jawaabay weliba soo daliishaday aayad quraan ah.
Wuxuu yiri, “ Horayna waad iigu tiri oraahdan dhowr jeer; war ninyohow adigu doqon ayaad tahay oo feejignaashadu waa kugu yartahay, sow maadan aqrisan aayadda quraanka ee macneheedu yahay, ‘Kuwi ilaahay rumeeyeenow feejignaada’.”
Anigoo og inuu ninkani yahay nin ku duqoobay doobnimo ayaan dhinaca kale ka galay haddana anigoo leh, “Dad kale kama nixi jirine gabadha ayaad aad u jeceshahay ayaan filayaa?”
Inta qoslay ayuu yiri, “Taas miyaa iswaydiin u baahan.” Maxaad ii juqjuqaynsaa oo qalbigayga u daalacanaysaa?
Markay intaasi ina dhex martay ayaan kheyr u rejeeyay anigoo weliba aad ugu tahniyadeeyay arinta guurkiisa sidaasna isku macsalaamaynay.
Sidee bay adiga kuu saameeyeen dhacdooyinkaan iyo kuwa kale ee la midka ah? Hadii aad saaxiibkay oo kale ahaan lahayd ma u malaynaysaa inaad heerkan gaarsiin lahayd arinta oo dad kala tashan laheyd mise wax baad kaligaa ku dhaqaaqi lahayd? Cinwaanka maqaalka aan siiyay ma ka badbdiyay mise waa mid xaqiiqada u dhow?
Ugu danbaynti hadii aad jeceshahay inaad wadankan ku sii noolaato ama shaqo iyo tashiilaad kaleba ka heshid u codeey xisbiga dimuqraadiga oo iyagu dadka tabarta yar iyo guud ahaan horumarinta dhaqaalaha ku dadaala.
Axadi lasoo dhaafay ee 8/5/12 waxaa magaalada Oak Creek ee gobolkaasi Wisconsin ka dhacay weera uu nin cadaan ah ku qaaday macbad ay leeyihiin dadka Siikha oo iyagu daysta garka weliba taas ay u raacdo iyagoo Cimaamad wayn ku duubta madaxa. Ninkan waxa uu dilay dhow qorf oo ka tirsan dadka Siikha isagoo dhaawacay dersin dad ah oo ay weliba ku jiraan booliiski meesha ku soo baxay qaar ka mid ah. Ninkan waxaa la sheegay inuu horay uga tirsanaa ciidanka dalkan iyo weliba ururka dadka cadaanka ah ay leeyihiin ee xagjirka ah aaminsanna inay dadka cadi ka sareeyaan dadka kale ayna tahay in dalkan laga tirtiro intaan dadka cad ahayn.
Bishan Juullaay dhexdeeda ayaa nin Maraykan cadaana ah oo horay uga tirsanaan jiray wuxuu isku deyay inuu baabuur waxyaabaha qarxa ay ka buuxaan uu geliyo masaajir ku yaala Detroit. Ninkan wuxuu kasoo safray gobolka Kalifornia si uu u sameeyo falkan asagoo aaminsan inuu ajir ku helayo arintan haduu sameeyo maadaama uu laynayo dad uu u arko gaalo. Waxaa laga yaabaaa inaadan maqlin arintan maxaa yeelay sidaas looma sii buun buunin lagamana sii deyn telefishanada iyadoo lagu tilmaamayo nin argagixisa. Inta aanan maqal ee maalin walba dhacda ayaa ka badan oo aanan soo gaarin saxaafadda amaba ay iska yaraystaan.
Magaalada Coon Rapids oo ka tirsan gobolkaasi Minnesota ayaa maalin dhoweyd naag cadaan ihi wejiga uga dhufatay doobtaha ama weelka ay dadkani biyaha kulul ku shubtaan. Taas ayaa dhacday jimicihii la soo dahaafay oo ay taariikhdu ahayd 11/6/15. Gabadha ayaa isbitaalka loola cararay iyadoo 17 qodob la tolay wejigeeda. Dabcan gabadhu lab sheey ayay sababsaty. Tan koowaad waa inay muslim tahay oo xijaab xirantahay. Tan labaad waa inay ku hadasha luqad aan Ingiriisi ahayn. Su’aasha lays weydiin karo waxay tahay hadii gabadha iyo dadka la socda ay ahaan lahaayeen kuwa ka yimid Iskandaneeviyaanka oo cadaan ah kuna hadlaan luqadda Danishka ama Norvejka ama Swidhishka sidaa ma loo geli lahaa? Jawaabtu waa ay iska cadahay oo waa maya. Haddaba gabadhan waxay eersatay midabkeeda,aslkeeda iyo diinteeda.
12/29/2015, waxaa ka dhacay magaalad Washington ee ah caaasimadda gobolka Seattle isku day dil oo laysku deyay in laba oday oo Soomaaliyeed lagu dilo. Dhacdadan waxaa ka masuul ahayd gabar cadaan ah oo baabuur dardarsiisay labada oday. Waxaa cadayn u ah inay u qeseday inay disho odayaasha iyadoo markii ay markii hore la dul martay baabuurka haddana dib ugu soo noqotay oo dul marsiisay mid ka mid ah odayaasha gaarig mar kale. Labadn oday kii baabuurka l jiirsiiyay labada jeer waa uu dhintay kadib markii la gaarsiiyay isbitaalka. Odayga labaad dhaawac ayaa soo gaaray sida uu sheegay Booliiskuna waa ka kici doonaa dhaawaca. In qof denbi galo waa wax dhici kara ama la filan karo laakin dhibta jirta waxay tahay in cadaaladda iyo sharciga si wanaagsan loo sameeyay laakiin dadka markaas ka shaqeeynaya iyo samayn karaan la joojiyaa banaan la jiifiyaana banaan. Taas waxaan u la jeedaaa waxaa dhici karta in gabadhan falka geysatay loo sameeyo qiil. Dhowaan waxaa laga yaabaa inaan aqrisano in maskaxda looga jiray, inay cabsanayd, amaba inay odayaashu qalad ku jireen oo ay wadada dhex socdeen.
Waxaa dugsiga Southwest High School in Green Bay, Wisconsin ka dhacay dhacdo in uu wiil 17 jir ah oo Soomaali ah dharbaaxay macalinkiisi iskuulka. Sababta ayaa lagu sheegay in dhowr jeer macalinku wiilka kula hadlay erayo qaniisnimo ah oo uu u qaatay wiilku inuu macalinku doonayo inuu fal qaniisnimo la sameeyo taas oo uu aad uga carooday. Taas waxay ahay usbuuca dhamaadkiisa waxaana arinta ka war helay maamulaha iskuulka oo wiilka ku yiri waxba dhicimaayaan ee iska iloow arintan. Sida waalidka wiilku sheegeen aad ayuu u caraysnaa Sabtidi iyo Axadii asagoo qaadan waayey inuu macalinkiisu lasoo damcay qaniisnimo. Waalidka ayaa isku deyay inay dejiyaan wiilka. Wiilka ayaa markuu iskuulka kusoo noqday dharbaaxay macalinka. Lama oga inuu macalinku mar kale wiilka kula hadlay intaanu dharbaaxin iyo inkale. Haddaba su’aasha iswediita leh waxay tahay muxuu maamuluhu macalinka ula hadli waayey uguna sheegi waayey inuu wiilka ka raali geliyo erayada aflagaadada ah? Muxuu baaritaan ugu samayn waayey arinta oo macalinka uga joojin waayey inuu iskuulka kusoo noqdo inta baaritaanku ka dhamaanayo? Waxay u muuqataa inuu maamuluhu iska sahladay arinta amaba aanu dan ka gelin wiilkan madow, muslimka ah, ee hadana wliba Soomaali ah. Taas waxaaba kasii daran in wiilkii loo diray xabsiga dadka waaweyn iyadoo lagu soo eedeeyay inuu geystay xadgudub iyo weliba qas abuur taas oo keeni karta in lagu xukumo ilaa iyo saddex sano iyo bar hadii maxkamaddu sidaas go’aansato. Miyaanay kuu muuqan in fal yar xabsiga kuu diri karo oo uu noloshaada bur burin karo. Runti, arintan si kale ayaa loo fasiri karaa oo ah inuu wiilku naftiisa difaacayey oo ku fikirsanaa biyo intaanay kusoo gaarin ayaa laska moosaayey ninkan intaanu gacmaha kula soo gelin iska qabo. Anigu waxaan soo jeedin lahaa inay Soomaalidu sharci yaqaano aqoon iyo karti leh u qabtaan arintan dadka ku haboon oo ka tirsan maamulka gobolkana lagala hadlo si wax looga qabto. Waa arin bulshada Soomaalida oo dhan muhiim uah maxaa yeelay berito wiilkaada ayaa lala soo aadi karaa damac qaniisnimo haduu isdifaacana waa la xirayaa oo noloshiisu sidaas ku baabe’eysaa. Sharciyada quseeya qaniisnimada iyo hadii nin xoogo will yar weli si fiican uma qeexna marka waa arin u baahan in dadka marayka oo dhan ay ka hadlaan loona soo jeediyo dowladda inay dejiso sharciyo ku aadan arintan si caruurteenu ay uga badbaadan kufsiga qaniisiga ah. Sidaad ogtihiinba wadanka gobalo fara badan waxaa la sharciyeey in laba nin isguursan karaan laakiin waxxaa iyaduna muhiim hadii nin ama niman nin kufsadaan sidee loo xukumayaa; hadii qaniis uu kufsado wiil yar sidee loo xukumayaa.
Booliiska ayaa soo saaray vidyoow tusinaya nin ku weeraray masaajidka hortiisa mgaalada New york maalintii Arbacad ee koowda bishan Juun. Maxamed Rashiid Khaan oo 59 jir ah wuxuu kasii baxayey Rugta Islaamiga ee wadada Jamaica markii uu garaacay oo uu ka tuuray nin baaskiilkiisi nin cadaan ah. Waxaa soo gaaray dhaawacyo daran sida boolisku sheegay. Khaan oo xirnaa dharka lagu yaqaan islaamka waxaa loola cararay Isbitaalka Jamaika oo lagula tacaalay lafo jabay wejiga, iyo feeraha.
Wixi tale iyo tusaale ah noogu soo hagaaji: wacyigelin@yahoo.com
Filed under: Uncategorized « DOOD KU SAABSAN IN LUQADDA CARABIGU AY ZUULAYSO MUSTAQBALKA DHOW IYO INAY SII JIRAYSO: SIDEE BAY KUULA MUUQATAA? DAAWAO DOODDA QSIIDO NABI AMAAN: MAGOOL DHEGAYSO »